झन्डै चार लाख बढी विद्यार्थीको भर्नातिर विश्वविद्यालय - हेल्लो चितवन अन्लाईन्
झन्डै चार लाख बढी विद्यार्थीको भर्नातिर विश्वविद्यालय
माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सोमबार कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक गरेलगत्तै विभिन्न विश्वविद्यालयले स्नातक तहको भर्ना कार्यक्रम प्रारम्भ गर्न प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सार्वजनिक नतिजाबाट झन्डै चार लाख ३३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई एकै पटक उच्च शिक्षामा ढोका खुलेपछि विश्वविद्यालयहरूले भर्ना कार्यक्रम सुरु गर्नेभएका हुन् ।
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले स्नातक तहका लागि भर्ना आह्वान गर्दैछ । विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले स्नातक तहका कार्यक्रम माघबाटै प्रारम्भ गरिने जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा भर्ना कार्यक्रम जारी राखेको छ । कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी रहे पनि विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने कार्यक्रम जारी राखिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले जानकारी दिनुभयो । विश्वविद्यालयले स्नातक तहका सबै कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा सुरु गर्ने गरेको छ ।
फागुनबाट स्नातक तहको शैक्षिक सत्र प्रारम्भ गरिने छ । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण केही महिना ढिला गरेर भर्ना कार्यक्रम सुरु गरिने भएको हो । आगामी चार वर्षभित्र हाल बिग्रेको स्नातक तहको शैक्षिक सत्र मिलाउने योजना विश्वविद्यालयले बनाएको छ ।@gorkhapatra